Ntuziaka maka Ahịa Akaụntụ Ahịa | Martech Zone
Ntuziaka maka Ahịa Akaụntụ Ahịa
Tọzdee, Nọvemba 7, 2013 Tọzdee, Nọvemba 7, 2013 Douglas Karr
N'ihu nke oma Demandbase tinye ọnụ maka infographic a, na-atụle ahịa B2B ọdịnala lekwasịrị anya na ahịa ahịa dị egwu. Ọ bụ ezie na ịre ahịa inbound na-arụ ọrụ iji nweta ndị ziri ezi na saịtị gị, a ka nwere profaịlụ dị adị maka ezigbo onye ahịa gị kwesịrị ịchụso. Chọpụta folks na-abata gị na saịtị ahụ na-echefu nkwenye (njirimara azụmahịa) data na ụlọ ọrụ ha, afọ, ego ha nwere, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ha, wdg nwere ike inyere gị aka ibute mbọ ị na-agba ọsọ.
Mgbanwe mgbanwe dijitalụ agbanweela kpamkpam ụzọ ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa na-emekọrịta ihe, mana ndị na-ere ahịa na-aga n'ihu na-azụ ahịa n'otu ụzọ ochie. N'ezie, ha na-akwụ ụgwọ maka emeghị ihe ọhụụ: imefu ọtụtụ puku puku dollar ahịa na-enweghị isi na ebumnuche ndị na-agaghị agbanwe agbanwe. Yabụ kedu ihe ọzọ? Iche na Akaụntụ Ahịa. Ọ bụ ngwụcha njedebe na-enyere gị aka ịmata akaụntụ gị na azụmaahịa gị naanị maka akụkọ ndị ahụ na ọkwa ọ bụla n'ime olulu ahụ. Demandbase
Demandbase bụ ebe Digital Presence na Akaụntụ Dabere Ahịa jikọtara, na-enye ndị na-ere ahịa B2B aka ịlele ndị na-ege ha ntị kachasị baa uru ma hazie ahụmịhe ahụ iji mee ka itinye aka na-arụ ọrụ nke ọma ma nwekwaa atụ.
Tags: ahịa b2bazụmahịa na azụmahịaisi-alankwenyelekwasịrị anya na ahịa ahịa